China Optical Rotation Polarimeter ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Polarimeter > အလိုအလျောက် Polarimeter > Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည်
Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည်
JH-P100Optical Rotation Polarimeter သည်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏လည်ပတ်မှုကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နမူနာ၏ optical လည်ပတ်မှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ သန့်ရှင်းမှု၊ သကြားပါဝင်မှု (သို့) နမူနာအကြောင်းအရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
JH-P100 Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည် is an instrument for measuring the optical rotation ofasubstance. By measuring the optical rotation of the sample, the concentration, purity, sugar content or content of the sample can be determined.
1. Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည် Introduction
2.Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည် Parameter
ထုတ်ကုန်အမည် Optical လည်ပတ်မှု polarimeter
တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး -45 °ï½ž+45 ° -120 °Zï½žï¼ ‹120 ° Z
အနည်းဆုံးစာဖတ်တန်ဖိုး 0.001 ° 0.01 ° Z
တိကျမှု ± (0.01 °+တိုင်းတာခြင်းတန်ဖိုး× 0.05%) ± (0.03 °+တိုင်းတာခြင်းတန်ဖိုး× 0.05%) Z
ပြန်လုပ်နိုင်ခြင်း (အများဆုံးသွေဖည်ခြင်း) â‰¤0.002°± 0.006 ° Z
ပြသမှုပုံစံ LCD မျက်နှာပြင်
အတိုင်းအတာများ ၆၀၀ မီလီမီတာ× ၃၂၀ မီလီမီတာ× ၂၂၀ မီလီမီတာ
3. Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည် Feature
1: Built-in Parpaste အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ တိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
ဓာတ်ရောင်ခြည်သုံး polarimeter ကိုသကြား၊ ဆေးဆိုင်၊ ဆေးဝါးစစ်ဆေးခြင်း၊ အစားအစာ၊ နံ့သာမျိုး၊ monosodium glutamate၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ရေနံစသဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အရည်အသွေးစသည်တို့ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
Optical rotary polarimeter သည် photoelectric detection and automatic servo mechanism control, backlit liquid crystal display, test data သည်ရှင်းလင်းပြီးအလိုလိုသိသည်၊ သုံးကြိမ်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုကယ်တင်နိုင်ပြီးပျမ်းမျှတန်ဖိုးတွက်ချက်နိုင်သည်။ RS232 interface ပါ ၀ င်ပြီးဒေတာများကို PC သို့ပို့နိုင်သည်။
Jiahang Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည် has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
၇။ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု
မေး။ ။How many years have your company made Optical Rotation Polarimeter ဖြစ်သည်?
hot Tags:: Optical Rotation Polarimeter၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE